स म्भोगअघि महिला-पुरूषले जान्नैपर्ने १० कुरा !
हाम्रो सामाजमा यौ’ न जीवनलाई खुल्ला राखिएको छैन तर, मानिसका लागि यौ’ न आधारभूत आवश्यक्ता हो । मानव जीवनको अनिवार्य आवश्यक्ताको रुपमा रहेको यौ ’न जीवनलाई सहज र सफल कसरी बनाउने भन्ने कुराबारे सचेत बन्याै भने याैन जीवनमात्र नभइ समग्र दाम्पत्य जीवन नै सफल हुन्छ ।
–स’ म्भो गका बेला जोडीको मूडलाई ध्यानमा राख्नुहोस् । यदि जोडीको मुड खराब छ भने माया र स्पर्शले पहिले उसको मुडलाई सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् तर स’म्भो गका लागि जोडी तयार नहुँदै कर गर्नु राम्रो हुँदैन ।
–स म्भो’गका बेला एक–अर्कामा शारी ’रिक एवं मा’न सिक रूपले बढी भन्दा बढी नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस् ।
–यौ’ नस’ म्पर्कका बेला हरेक कुरालाई ग म्भीर रूपले लिनु हुँदैन । अ न्तरंग पलहरूलाई सधै ख्यालठट्टाको रूपमा लिनु उचित हुन्छ।
–स’ म्भो गका विषयमा मनमा केही शं*का भएमा पहिले त्यसलाई हटाएर मात्र स’म्भो गको सिलसिला अघि बढाउनुपर्छ ।
–स म्भो’गका दौरान जोडीको सन्तु ष्टिको ख्याल गर्नुहोस् ।
– पर्याप्त आ’नन्द लिनका लागि तपाईं शा रीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । त्यसैले सधैं व्यायाम र सन्तुलित भोजन ग्रहण गरी तन्दुरुस्त रहनु राम्रो मानिन्छ ।
–सम्भो’गका बेला पा’क्क्री डामा बढि जोड दिनुहोस् । यसले जोडीलाई बढी च’रमसु ख प्राप्त हुन्छ ।
–स’म्भोगका बेला कम बोल्नुहोस् र आफ्नो जोडीप्रति एकाग्र भइ उनका कुरापनि सुन्नुहोस् ।
–स’म्भो गलाई निरन्तरता दिनुहोस् । स’म्भो गमा धेरै अन्तराल राख्नु राम्रो होइन ।
–स’म्भोग का बेला आफ्नो जोडीको प्रशंसा गर्न नभुल्नुहोला । एजेन्सी
यो पनि- पुरूषलाई पटक्कै मनपर्दैन महिलाका ८ बानी
महिला–पुरुष बिना दुनियाँ चल्न सक्दैन । एकआपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने यी दुई बीच कतिपय यस्ता आनीबानीहरु हुन्छन्, जुन पुरुषलाई मन पर्दा महिलालाई मन पर्दैन भने महिलालाई मन पर्दा पुरुषलाई मन पर्दैन ।यहाँ पुरुषलाई पटक्कै मन नपर्ने महिलाका यि स्वाभाव आनीबानीका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
–महिलाहरु खित्का छाडेर हास्न मन पराउँछन् । हास्नु राम्रो कुरा पनि हो । तर कतिपय बेला उनीहरुले दिने हाँसोले पुरुषको रिसको पारोलाई ह्वात्तै तत्काउने गर्छ । जव आफुले गरेका ग ल्ती ढाक्न या लुकाउनका लागि उनीहरुले हाँसेर टार्ने प्रयास गर्छन, त्यतिवेला प्रायः पुरुषलाई उनीहरुप्रति निकै रिस उठ्ने गर्छ ।
– धेरैजसो महिलाहरु बेतुकका कुराहरुलाई पनि उठाइरहन्छन् । उनीहरुले बारबार उठाउने यस्ता बेतुकका कुराहरु पुरुषलाई मन पर्दैन । उनीहरु के म मोटी छु,मेरो सौन्दर्य कस्तो छ, मलाई मानिसहरुले कसरी लिन्छन् जस्ता कुराहरु बारबार निकालेर पुरुषलाई हैरान बनाउँछन् तर पुरुषलाई यस्तो बानीले दिक्दारीको उचाइमा छाडिदिन्छ ।
–महिलाहरु आफ्नो सौन्दर्य प्रति अति नै चिन्तित हुन्छन् । कतिसम्म भने उनीहरु आफ्नै सौन्दर्यप्रति समेत विश्वस्त हुन सक्दैनन् । कारण,महिलाहरु बारबार आफ्नो सौन्दर्यताको निगरानी गरिरहन्छन् । उनीहरु कुनै पुरुषसँगको भेटघाट या बाहिर कतै गएर आएपछि तत्काल आफुलाई ऐना छेउमा दाज्न पुर्याइहाल्छन् । जुन पुरुषलाई पटक्कै मन पर्दैन ।
–अधिकांश महिलाहरु आफ्नो पर्समा मेकअपका सामाग्रीहरु राख्न छुटाउँदैनन् । जव पार्टी वा अन्य भेटघाटमा जानै पर्नै हुन्छ त्यतिबेला उनीहरुले कम्तीमा पनि दश पटक अनुहार चम्काउने पाउडर दल्छन् र नखरा पार्छन । त्यसपछि गाडीमा बस्दा होस् या उठ्दा,हरेक पटक आफ्नो अनुहारमा मेकअप गर्नैपर्छ ? यस्तो हर्कतले पुरुषलाई महिलाले कहिल्यै नचिताएको सास्ती दिन्छ ।
–प्रायः महिलाहरु ठुला झोला बोक्न मन पराउँछन् । तर पुरुषहरुलाई उनीहरुले बोक्ने त्यस्ता ठुला झोलाहरुले उनीहरुप्रति दिक्दारी बढाउने काम गर्छ । अर्कातर्फ पुरुषहरुलाई उनीहरुले बोक्ने ठुला झोलाहरुमा के छ भन्ने जिज्ञासा पलाउँछ, र केटीले बोक्ने त्यही झोला केटाहरुका लागि रहस्यको पोको हुन्छ । तर उनीहरु अक्सर जिज्ञासा मेटाउन असफल हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरुलाई केटीले बोक्ने त्यस्ता झोला प्रति बि तृष्णा जाग्छ ।
– महिलाहरु सरसफाइमा बिशेष ध्यान दिन्छन् । तर कतिपय बेला उनीहरु अनाबश्यक सरसफाइका काममा लागेर पुरुषलाई सताउने सम्मका काम गर्न समेत पछि पर्दैनन्,जसले पुरुषको दिमाग खराव गराउँछ ।
– महिलाहरु पहिरनका निकै नै सौखिन हुन्छन् । कतिसम्म भने उनीहरु दिनमै कयौं पटक आफ्ना पोशाक परिबर्तन गर्न उत्सुक देखिन्छन् । सम्भव भएमा उनीहरु घन्टा–घन्टामै आफ्नो पहिरन फेर्न खोज्छन् ।
– महिलाहरु यदि कसैले उनीहरुको इच्छाविपरितको काम गर्न खोज्यो भने उल्टो प्रतिक्रिया दिने स्वभावका हुन्छन् । उनीहरु त्यस्तो बेला आफुलाई लागेको भन्दा उल्टो कुरा गर्छन र भित्रभित्रै जल्छन् । जुन पुरुषलाई मन पर्दैन ।